ဒဿန ခရီးစဉ်: ကျွန်ုပ်၏ ကိုးကွယ်ရာ ဆိုသည်မှာ…
သင်တို့သည် ဗုဒ္ဓဆိုလျှင် ဂေါတမထင်ကြသည်…
ကျွန်ုပ်၏ ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားဆိုသော ဗုဒ္ဓမှာ…
ထေရ၀ါဒနွယ်ဝင်များ အသိရှင်းပေမဲ့ အမြင်ရှင်းစေဖို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုးကွယ်ရာ…
ကျွန်ုပ်တို့ ကိုးကွယ်သောဘုရားသည် ဗုဒ္ဓဖြစ်ပါသည်...
ဒါကိုတော့ သိကြပေသည်… သို့သော် ဗုဒ္ဓတွေ များလှပေသည် ဘယ်ဗုဒ္ဓဖြစ်မည်…?
၁… ဂေါတမအနွယ် သိဒ္ဒတ္ထမင်းသားမှ သစ္စာလေးပါးသိသော သဗ္ဗညုတ ဂေါတမဗုဒ္ဓ…
၂… ဂင်္ဂါဝါဠု သဲစုမက ပွင့်လေပြီးသော သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော်ရှင် ဗုဒ္ဓများ…
၃… သစ္စာလေးပါးကို ကိုယ်တိုင်သိသော ပစ္စေကဗုဒ္ဓများသာ ဖြစ်ကြပါတယ်…
သို့အတွက်ကြောင့် ထိုဘုရားရှင်တို့ကို ရည်မှန်း ရည်ညွှန်း၍ထုလုပ်သော ဆင်းတုတော် စေတီတော်များကို ကိုးကွယ်ရာအဖြစ်ဖြင့် သတ်မှတ်ပူဇော်ကြပါတယ်…
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားစေတီ နမူနာ…
ထိုစေတီတော်သည် သိဒ္ဒတ္ထမင်းသား သစ္စာလေးပါးသိမြင်ရာအရပ် မဟာဗောဓိပင်ပေါက်ရောက်ရာ အရပ်ဒေသတွင် သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်ကို ရည်မှန်း၍ တည်ထားသောကြောင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်… ကျွန်ုပ် ကိုးကွယ် ရှိခိုးပါသည်…
ထိုစေတီတော်သည် သဗ္ဗညုတ ဘုရားရှင် လေးဆူ၏ ဓါတ်တော်မွေတော်တို့ကို ရည်မှန်း၍ တည်ထားသောကြောင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်… ကျွန်ုပ် ကိုးကွယ် ရှိခိုးပါသည်…
ထိုစေတီတော်သည် သဗ္ဗညုတ ဂေါတမဘုရားရှင်အား ရည်စူး ရည်ညွှန်း ရည်မှန်း၍ တည်ထားသောကြောင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်… ကျွန်ုပ် ကိုးကွယ် ရှိခိုးပါသည်…
အလိုတော်ပြည့်ဘုရား ဆင်းတုတော်သည် ဂေါတမနွယ်ဖွား လေးသစ္စာမြင် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်အား ရည်မှန်း၍ တည်ထားသောကြောင့် ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်ပါသည်… ကျွန်ုပ် ကိုးကွယ် ရှိခိုးပါသည်…
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်ရာ ဘုရားစေတီ နမူနာမျှသာဖြစ်ပါတယ်… ပစ္စေကဗုဒ္ဓနှင့် သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓကို ရည်မှန်းထုလုပ်သော ဆင်းတုစေတီမှန်သမျှ မည်သည့်ပုံ ဖြစ်ပါစေ ထေရ၀ါဒီတို့၏ ကိုးကွယ်ရာ ဖြစ်ပါတယ်…
ထေရ၀ါဒီများ မကိုးကွယ်သော ကိုးကွယ်ရာ မဟုတ်သော ဘုရားဆင်းတုများ နမူနာ…
သုခ၀တီကောင်းကင်ဘုံတွင် တည်ရှိသော သက်တော် အနန္တရှည်သော အလင်းရောင် အနန္တရှိသော ထာဝရ ဘုရားကြီးကို ရည်ညွှန်း ရည်မှန်း၍ တည်ထားကြပါသည်… သဗ္ဗညုတဘုရားရှင် ဂေါတမကို ရည်မှန်းသောဘုရား မဟုတ်၍ ထေရ၀ါဒ ဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်ရာဗုဒ္ဓ မဟုတ်ပါ… မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာ ကိုးကွယ်ကြသော ဆင်းတုတော် ဖြစ်ပါတယ်… ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ထေရ၀ါဒီများ မကိုးကွယ်ပါ ရှိခိုးခြင်းပြုရန် မလိုပါ…
ကမာကူရ - ကာမာကူရ - ကာမကုရာဗုဒ္ဓ…
ဂျပန်နိုင်ငံ ကမာကူရမြို့တွင် တည်ထားသော ဆင်းတုတော်ကို ကာမာကူရဗုဒ္ဓခေါ်၍ အမီတာဘာကို ရည်ညွှန်း ရည်မှန်းပါတယ်… သဗ္ဗညုတဘုရားရှင် ဂေါတမကို ရည်မှန်းသောဘုရား မဟုတ်၍ ထေရ၀ါဒ ဘာသာဝင်များ ကိုးကွယ်ရာဗုဒ္ဓ မဟုတ်ပါ… မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာ ကိုးကွယ်ကြသော ဆင်းတုတော် ဖြစ်ပါတယ်… ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ထေရ၀ါဒီများ မကိုးကွယ်ပါ ရှိခိုးခြင်းပြုရန် မလိုပါ…
ထေရ၀ါဒဘုန်းကြီးတစ်ချို့ မဟာယာနကိုးကွယ်သော အမီတာဘာဘုရားဆင်းတုနှင့် ကမာကူရဘုရားကို ရှိခိုးနေခြင်းများ မကြာခဏ တွေ့မြင်နေရသည့်အတွက် စဉ်းစားမရပါ… မသိလို့လား…? သိတော့သိတယ် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လား မပြောတတ်ပါ… သို့သော် တစ်ချို့ကလည်း ပြောကြပါတယ်… ဂေါတမဗုဒ္ဓကို အာရုံပြုပြီး ကမာကူရ အမီတာဘာကို ရှိခိုးလို့ မရဘူးလားတဲ့… မိမိဟာမိမိ ဂေါတမဗုဒ္ဓကို အာရုံပြုပြီး ရှိခိုးတာ ရတော့ရနိုင်ပါတယ် သို့သော်… ဘေးကကြည့်နေသူ လူအများကတော့ တို့ဘုန်းကြီးတွေလည်း မဟာယာနဗုဒ္ဓကို ရှိခိုးကြတာပဲလို့ ထင်သွားကြမှာ အမှန်ပါပဲ… မိမိရဲ့ ထေရ၀ါဒမျိုးဆက်တွေကလည်း တို့ဆရာဘုန်းကြီးတွေ ရှိခိုးတဲ့ ဆင်းတုတော်ပဲလို့ ထင်သွားကြမှာ အမှန်ပါ… ထင်လည်းထင်နေကြပါပြီ…
ဂျပန်ကိုရောက်တဲ့ ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဒကာဒကာမတွေ ကျောင်းရောက်လာလျှင် မေးကြည့်မိပါတယ် ကမာကူရဘုရား ရောက်ခဲ့ ရှိခိုးခဲ့လားဆို ရှိခိုးခဲ့ပါတယ်ပဲ ပြောကြတယ်… မျိုးဆက်သစ်တွေ အတော်များများ ဘုရားဆင်းတုတော်ဟာ ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရည်မှန်း ထုလုပ်မှ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဆင်းတုဆိုတာ မသိကြတော့တာ များနေပြီ…
ထပ်ပြီး ပြောပြပါရစေကွယ် ထေရ၀ါဒီ ဒကာဒကာမတို့ရယ်…
အမီတာဘာ- အော်မီတော်ဖော်ဆင်းတုများနဲ့ ကမာကူရဘုရားသည် ထေရ၀ါဒ ကိုးကွယ်သော ဘုရားဆင်းတုများ မဟုတ်ကြပါ… သူတို့ရည်ညွှန်းသည်မှာ သုခ၀တီကောင်းကင်ဘုံက ထာဝရဘုရားသာ ဖြစ်ပါသည်… မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ၏ ကိုးကွယ်ရာ ဗုဒ္ဓ၊ ဓမ္မ၊ သံဃာတို့သည် ထေရ၀ါဒီတို့ ကိုးကွယ်သော ဗုဒ္ဓ၊ ဓမ္မ၊ သံဃာတို့နှင့် လုံးဝ မတူတော့ပါ… ထေရ၀ါဒီတို့ အသိရှင်းလို့ အမြင်ရှင်းဖို့ လိုပါပြီ… အသိမရှင်း အမြင်မရှင်းလျှင် ထာဝရဘုရားမှ ထေရ၀ါဒီ ဂေါတမဗုဒ္ဓကို ၀ါးမျိုပါတော့မည်… တတ်သိနားလည်သောပုဂ္ဂိုလ်များ လျှော့တိလျှော့ရဲ လုပ်နေကြပါလျှင် သင်တို့၏မျိုးဆက်များ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြပေတော့မည်…
မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မို့ ရှိခိုးကိုးကွယ်တာပါ ဆိုလျှင်တော့ဖြင့် ပြောစရာမရှိပါလေ…
Posted by monk at 1/09/2011 11:01:00 PM
ကျေးဇူးကြီးပါတယ် ဘုရား။ တပည့်တော်မတို့ အမြင်ရှင်းရပါတယ် ဘုရား။ မှတ်သားဖြန့်ဝေပါ့မယ် ဘုရား။
တပည့်တော်ဘာသာေ၇းစာတွေေ၇းပါတယ်ဘု၇ား ဒါပေမဲ့ဒါကိုမသိတာအမှန်ပါ အတော်လေးရှက်မိသွားပါတယ် ထေရ၀ါဒဆိုပြီးကာမာကုရဘုရားပုံလေးတောင် တင်ထားပါသေးတယ် ခုဖြုတ်လိုက်ပါပြီ
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဆရာတော်ဘုရား တပြည့်တော်ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေ ဌေးသာမဏေကျော်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ညွှန်လို့ရောက်လာတာပါ မဟာယာနဘုရားတွေနဲ့ပါတ်သက်လို့ ပိုပြီးအမြင်ရှင်းသွားပါပြီဘုရား ဆရာတော်သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပြီးသာသနာအကျိုးသည်ပိုးနိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဘုရား